Meelaha Khadka Tooska ah ee Malay - Koodhadhka Lacagta ee Khadka Tooska ah
(545 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Loading ...Noocyada khamaarka badankood waa sharci in Malaysia ah, laakiin sababo diimeed, muslimiinta maxalliga ah looma oggola inay ka qeybgalaan madadaalo noocaas ah. Malaysia dhexdeeda, waxaa ku yaal ciyaaro casino, mashiinno lagu cayaaro iyo bakhtiyaanasiibyo. Marka laga reebo tartanka fardaha, dhammaan noocyada kala duwan ee sharadka isboortiga waa mamnuuc. Sannadkii 2010, isku day ayaa la sameeyay si loo soo celiyo sharadka isboortiga, laakiin shati la soo saaray oo keliya ayaa isla markiiba la joojiyay.
Malaysia dhexdeeda, waxaa ku yaal kaliya hal casino Genting (Genting). Waa xarun aad u ballaadhan oo had iyo jeer la booqdo. Waxaan ku xusneynaa galkayaga khamaarka ee khadka tooska ah oo ah meesha kaliya ee dalka ka mid ah oo ay Malays si sharci ah ugu ciyaari karto ciyaaraha guddiga iyo kaararka. Is waafajinta noocan oo kale ah ayaa horseeday dhibaatooyin xagga hawlgalka khamaarka qarsoodiga ah iyo sharadka isboortiga, oo si joogto ah ula dagaallama Dowladda Malaysia.
Horaantii, oo ay la socdaan casino, Malaysia waxaa ka jiray mashiinno naadi ah oo leh kombiyuutar, sida boodboodh elektaroonig ah Hase yeeshee, sanadkii 2000, hoolalkaan yar yar ee qamaarka waxaa lagu xiray go'aanka dowladda, maadaama ay saameyn taban ku leeyihiin jiilka soo koraya ee dalka.
List of Online Sites Casino Top 10 Australia
Khamaarka online ee Malaysia
Sharciga khamaarka khadka tooska ah ee Malaysia ayaa joojiya qaabkan khamaarka. Dawladdu ma siinayso ruqsad furitaanka casinos ee waddanka oo waxay qaadaysaa tallaabooyinka ku habboon si loo hubiyo in cayaartoyda Malaysia aysan adeegsan karin bogag shisheeye. Milkiilayaasha makhaayadaha internetka ayaa lagu qaadi karaa mas'uuliyadda xallinta macaamiisheeda si ay u helaan boggaga internetka ee casino.
Markaad isticmaaleyso goobaha qamaarka ee internetka ee isboortiga, ciyaartoyda Malaysia waxay doorbidaan inay adeegsadaan adeegyada buugaagta sameeya, oo xafiisyo ku leh Aasiya. Guud ahaan, ikhtiyaarka ugu fiican ee ciyaartooyda maxalliga ah - si looga fogaado makhaayadda internetka iyo boggaga Aasiya ee sharadka isboortiga ee internetka.
Intaas waxaa sii dheer, bangiyada waxaa laga mamnuucay xawaaladaha Malaysia ee goobaha khamaarka ee internetka. Si kastaba xaalku ha ahaadee, sharcigan si adag looma xakameeyo, khamaarayaasha reer Malaysia ee doonaya inay ku ciyaaraan internetka, waa qaababka looga hor tagayo mamnuucidan. Intaa waxaa sii dheer, qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee caalamiga ah xitaa waxay ku bixiyaan adeegyadooda luuqada Malayga.
Boggaga internetka ee casino ayaa aqbalaya ciyaartoyda Malaysia
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbala ciyaartoy ka socota Malaysia, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka timaadda mashiinnada ciyaarta illaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa dib u eegistayada bogagga internetka ee khadka tooska ah, si aad uga feejignaato dhiirrigelinta khadka tooska ah ee ugu fiican, gunnooyinka iyo xulashooyinka lacag bixinta ee ay heli karaan ciyaartoy ka socota Malaysia.
Khamaarista magaalooyinka Aasiya - Singapore
Magaalada-Singapore waxay leedahay cufnaanta labaad ee ugu badan tobanka ugu sarreeya tayada adeegga dalxiiska. Dadku waxay halkan ka yimaadaan adduunka oo dhan si ay u bartaan weynaanta dhaqanka Aasiya oo ay tijaabiyaan nasiibkaaga. Xagee lagu nastaa oo lagu ciyaaraa raaxadaada? Maxaa la arkaa? CasinoTopLists waxay kuu sheegayaan wax ku saabsan warshadaha khamaarka ee dalkan iyo waxyaabo kale oo badan.
Singapore - in yar oo juqraafiya ah iyo taariikh ah;
Khamaaristu waa sharci tan iyo 2005;
Casriga ugu weyn:
Kantaroolka «Marina Bay Sands»;
Casriyeynta «Xarumaha Dunida Aduunka».
Kasiinooyinka internetka ee Singapore - waa mamnuuc, waa la xannibay, ciyaartoydu waxay heli karaan ganaax ama ciqaab ciqaabeed oo gaaraya illaa 6 bilood;
Shan goobood oo Singapore ah cinwaanada;
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan dalka iyo dadka.
Goobta Singapore iyo asalka taariikhda gaaban
Singapore - waa jasiirad (63 jasiiradood iyo aagga oo lagu ballaadhiyey dib u soo celin macmal ah), oo xuduud la leh jasiiradaha Malaysia iyo Indonesia. Markii ugu horraysay ee dalkan lagu xuso taariikhihii qarnigii saddexaad. Qarniyadii 15-16-kii dalku wuxuu ka mid ahaa Saldanada Johor, markii dambena wuxuu noqday gumeysi Boqortooyadii Ingiriiska.
Dheeraad ah Singapore waxay ka mid ahayd Malaysia. Sannadkii 1965, waddanku wuxuu ku dhawaaqay madax-bannaanidiisa, sannadihii ugu dambeeyayna wuxuu si buuxda ugu tiirsan yahay dowladda (xitaa biyaha la cabo waxay ahayd in laga iibsado waddamada deriska ah) iyo waddamada "dunida saddexaad" waxay noqdeen dowlad aad u horumarsan.
Taariikhda Singapore dowladdu waxay door muhiim ah ka ciyaartay, Lee Kuan Yew (1959-1990), qofkani wuxuu dalka ka dhigay dal barwaaqo ah. Hadda waa jamhuuriyad baarlamaani ah oo leh madaxweyne la yiraahdo Tony Tan.
Casinos iyo Khamaarista ee Singapore
Singapore - waddan leh kheyraad dabiici ah oo kooban. Waxay halkan ku nool yihiin badanaa sababo la xiriira maalgashadayaasha iyo "jawiga dhaqaale" ee wanaagsan - canshuuraha oo hooseeya iyo shirkadaha caalamiga ah.
Ilaa 2005 wadankan 40 sano oo khamaaristu ahayd mamnuuc gebi ahaanba, laakiin dhibaatada dhaqaale ayaa iskeed isaga dareemay dalkan. Waqtigaan la joogo, Singapore waxay noqotay xarunta labaad ee ugu weyn ciyaaraha ka dib Macao, iyadoo laga tegayo xitaa Las Vegas.
«Marina Bay Sands» - casino ugu weyn ee Singapore
Qaab dhismeedka weyn ee dhismahan waa 3 55-dabaq dhererkiisu yahay 200 mitir. Taawarradan dushooda waxaa ku jira wax u eg markab, nooc ka mid ah oasis biyo leh. Naqshadeynta waxaa oggolaaday khubarada Feng Shui. Waxaa la dhisay nedavno aad u adag- sanadkii 2010 shirkada «Las Vegas Sands».
Maxay u jiraan kaliya 2 baraf baraf, hudheel hudheel ah oo ku yaal goobta 2561 iyo barkadda dabaasha ee ugu weyn adduunka - warshadaha kaararka. Waxaa xusid mudan in biyaha ku jira saxanka biyaha roobka. Halkan waxaad ka heli kartaa sidoo kale xarumaha jimicsiga, makhaayadaha, naadiyada, goobaha wax lagu kariyo ee 'SPA', dukaamo. Agagaarka dhismaha weyn waxaa ku yaal matxaf qaab lotus ah. Waxaa jira bandhigyo farshaxan, naqshad iyo tikniyoolajiyad sare.
Iyo dabcan muujinta dhismaha, oo wax walba loo dhisay - casino.
cabbir «Marina Bay Sands» cajiib ah - 15,000 sq.m. Halkan, kuwa jecel khamaarka waxay ka ciyaari karaan 2300 boosaska ciyaartoyga, dareenkoodana waxaa matalaya 600 oo miisas oo loogu talagalay dhammaan cayaaraha la yaqaan ee ka soo jeeda roulette-ka iyo baccarat-ka Pai Gow Poker. Maalin kasta waxaa soo booqda ku dhowaad 25,000 oo qof.
Casriyeynta «Xarumaha Dunida Aduunka»
Fur casino ayaa wax yar ka horreeyay «Marina Bay Sands», jasiiradda Sentosa. Waxaa jira cagaar badan (naqshadayaasheeda postorayus waxay keydinayaan naqshadda dhismaha) iyo madadaalo. Kuwa ugu caansan waa Matxafka Badaha «Madxafka Badda ee Khibradda leh», waa jardiin madadaalo oo leh “Universal Studios Singapore” Madadaalo, aquarium-ka adduunka ugu weyn iyo baarkinka biyaha, waa ilo lagu sharfayo waxbarista Feng Shui «Harada Riyooyinka» .
Casino waxay ku qanacsan tahay muggeeda iyo noocyada kaladuwan ee la soo bandhigay. Muuqaalka Casino - farshaxanada muraayadaha ee cajiibka ah. Lacag bixinta markiiba waa la sameeyaa, cabitaannada aan khamriga lahayn waxaa lagu bixiyaa lacag la'aan.
FYI Bandhigga Singapore
Dadka degan Singapore waxay leeyihiin sharciyo adag - waa inay bixiyaan qiyaastii $ 100 maalin kasta xaq u yeelashada booqashada qamaarka. Ama iibso tigidh $ 2,000 booqasho sanadle ah. Marka, dowladdu waxay si firfircoon ula dagaallameysaa Khamaarayaasha - khamaar walba wuxuu leeyahay "liisaska madow" ee ku xadgudubka ciyaarta. Lacagtani waxay ku dhacdaa miisaaniyadda gobolka sadaqo.
Ajaanibta xeerar ka fudud. Waa inaad 21 jir noqotaa oo aad soo qaadataa baasaboorkaaga. Waxa kale oo jira astaamaha labiska oo ugu yar - dharka waa inuu ahaadaa mid hagaagsan oo aan xeebta ahayn (dharka gaagaaban iyo kuwa isbaddalaya lama oggolaan doono).
Bandhigga Online ee Singapore
Kadib dhisida casinos-ka dhulka ku saleysan dowladda Singapore inay si dhab ah uga fikirto xaddidaadda khamaarka internetka. Lacagtii dalka kama aysan bixin. Haddii hore fiidiyowyada fiidiyowga, blackjack iyo roulette waxay lahaayeen marin bilaash ah, laakiin hadda maahan.
Wadahadalka "siyaasadda khamaarka" ee gobolka waxaa laqabtaa 2014 waxayna u badan tahay in go'aanka uu noqon doono mid lagu taageerayo in gebi ahaanba la xiro booska internetka ee ajaanibta buugaagta sameeya iyo kuwa ka shaqeeya ciyaaraha. Tan iyo bilowgii 2015 wuxuu xanibay hawl wadeenada sida IBCBet, SBOBet iyo MaxBET. Dhammaantood waxay ku hoosjireen qufulka illaa 100 goobood. Inta lagu guda jiro ciyaarta bookmaker sharci darrada ah, waxaad heli kartaa ganaax ah qaddarka ku dhowaad 275 000 ama xabsi ah ilaa 6 bilood.
Singapore waxay ku qaadataa quruxdaada, ma aha oo kaliya maaddooyinka kala duwan iyo midabka aan caadiga ahayn, laakiin sidoo kale madadaalo.
Ferris wheel . Cinwaanka: 30, Raffles Avenue, saacad wareega. Isaga waxaad ku ogaan doontaa aragti qurxoon oo ka mid ah daaraha dhaadheer iyo xitaa Indooniisiya oo ay weheliso Malaysia (haddii aan daruuro lahayn). Qodobka ugu sarreeya - 165 mitir. Miyuu yahay kaabsoolool-qaboojiye raaxo leh, wareegga buuxa wuxuu qaadanayaa 30 daqiiqo
Dhismayaasha Park Studios Universal . Cinwaanka: 8 Sentosa Gateway. Hadaad jeceshahay raacid. Bandhigyo xiiso leh iyo carwooyin - adiga halkan.
Muuqaalka sawir-qaadashada . Cinwaanka: 26 Sentosa Gateway, Resorts World Sentosa. Matxafku wuxuu leeyahay in kabadan 100 sawir gacmeedyo iyo 3D, qofkasta wuu sawiri karaa oo wuxuu taaban karaa dhammaan gacmaha la soo bandhigay.
Jardiinooyinka "Night Safari" iyo "River Safari" . Cinwaanka: Rd Mandai Lake. Qiyaastii 2500 oo xayawaan ah iyo 6,000 oo xoolaha webiyada ah ayaa ku nool jardiinooyinkan. Waxaa jira taraam ay la socoto safar hagitaan ah, kaas oo ku soo wareegay beerta weyn 35 daqiiqo.
Clarke Quay . Goobta: Joojinta tareenka - Clarke Quay. Dalxiiska dalxiiska ayaa ka buuxa madadaalo, ilo, dukaamo iyo baarar. Dhaqdhaqaaqa aad u sarreeya, badiyaa habeenkii.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Singapore iyo Singapore
Singapore waxay leedahay gubasho gubasho aad u xoog badan xittaa marka la qariyo;
Singapore waxay leedahay sharciyo aad u adag, sidaa daraadeed waa amaan;
Ku fur shirkad 10 daqiiqo gudahood - baahi aad u badan oo loo qabo rgistratsii hay'ad sharciyeed;
Tayada cuntada ee dalka kaalinta labaad ka dib Japan;
Halkan waxaa ah tartanka habeenka "Qaab-1"
Singapore ee khariidadda dunida
0.1 List of Online Sites Casino Top 10 Australia
2.1 Khamaarka online ee Malaysia
2.2 Boggaga internetka ee casino ayaa aqbalaya ciyaartoyda Malaysia
3 Khamaarista magaalooyinka Aasiya - Singapore
3.0.1 Goobta Singapore iyo asalka taariikhda gaaban
3.1 Casinos iyo Khamaarista ee Singapore
3.2 Bandhigga Online ee Singapore
3.2.1 Soojiidashada Singapore
3.2.2 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Singapore iyo Singapore
3.2.3 Singapore ee khariidadda dunida